असोज ११, काठमाडौं । बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज (सोमवार) देखि सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले नुवाकोट जिल्लामा तल्लो तोदी खोलाको पानीबाट ४ दशमलव ९९३ मेगाबाट क्षमताको तल्लो तोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजना निर्माणको कुल लागत रू. १ अर्ब १९ करोड रहेको छ ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अपस्किृत वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १२ दशमलव ५६ ऋणात्मक र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ७१ दशमलव ४९ रहेको छ । उक्त अवधिसम्म कम्पनीले रू. ३ करोड ६८ लाख ३२ हजार खुद नोक्सानी व्यहोरेको छ ।